ဘာတွေကများ ဆေးယဉ်ပါးမှုကို ဖြစ်စေတာလဲ......... - Hello Sayarwon
ယဉ်ပါးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ပုံမှန်အားဖြင့် ကောင်းတဲ့ သဘောဆောင်ပေမယ့် ဆေးယဉ်ပါးတယ်ဆိုတာကတော့ ကောင်းတဲ့သဘော မဆောင်ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း ရောဂါတွေက များသလို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကလည်း အတော်လေး များလာပါတယ်။
ဒီလို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာထဲမှာ ဆေးယဉ်ပါးတာကလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ပေါ့။ ယဉ်ပါးမှုက ကေင်းပေမယ့် ဆေးယဉ်ပါးတာက အသက်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။
ဆေးယဉ်ပါးတယ်ဆိုာက ဆေးမတိုးတော့တာပါ။ ဆေးမတိုးတော့တဲ့အခါ ရောဂါဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုလိုပဲ ကုကု ပျောက်မှာ မဟုတ်တော့ဘဲ နောက်ဆုံးမှာ အသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆေးယဉ်ပါးတာကို ကြိုတင် သိရှိ ကာကွယ်နိုင်စေဖို့ ဆောင်းပါးလေးထဲကနေတဆင့် ပြောပြပေးလိုက်ပါရစေ။
ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုက ဘက်တီးရီးယားတွေ။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ဆေးတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကုသပျောက်ကင်းဖို့ ခက်ခဲလာတာပါ။ ဆေးယဉ်ပါးမှုဖြစ်လာရတာက
လူတွေ။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲတာ
ဒါက အဖြစ်များတဲ့ ဆေးယဉ်ပါးစေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း တစ်ခုပေါ့။ နှာစေးတယ်။ ဆေးသောက်ပါလား။ ချောင်းဆိုးတယ် ​ဆေးသောက်ပါလား။ တုပ်ကွေးဖြစ်တယ်။ ဆေးသောက်လိုက်လေ ဆိုတာမျိုးတွေက အမြဲလိုလို မြင်နေရ ကြားနေရတဲ့ ကိစ္စတွေနော်။
တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျတော့လည်း အသေအပျောက်နည်းအောင်၊ အသားတိုးအောင်၊ ရောဂါကင်းအောင်ဆိုပြီး အစားစာတွေထဲမှာ ဆေးတွေ ထည့်ကျွေးမယ်။ ဒီအသားတွေကို လူတွေက စားသုံးရာကနေ ဆေးတွေ ယဉ်ပါးလာပါတော့တယ်။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို ထင်သလို သောက်တာ
ပိုးသတ်ဆေးဆိုတာမျိုးက ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှ သောက်သင့်တာပါ။ ဆရာဝန်က မညွှန်ကြားဘဲ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားတဲ့ ထင်သလို သေက်သုံးတာတွေက ရေရှည်မှာ ဆေးယဉ်ပါးတာကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
စပ်ဆေးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးများတဲ့ ရောဂါဖြေရှင်းနည်းပေါ့။ နေမကောင်းတဲ့အခါ ဆေးခန်းသွားဖို့ထက် နီးစပ်ရာဆေးဆိုင်မှာ စပ်ဆေးဝယ်သောက်လိုက်ရတာကို ပို သဘောကျကြပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ရောဂါလေးကို ပြောပြလိုက် ဆေးလေးတစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်နဲ့ ဟုတ်နေတာပဲနော်။ တကယ်က ဒီလိုဆေးတွသောက်သုံးတာဟာ မလိုအပ်ဘဲ ဆေးယဉ်ပါးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အခြားသူ ကျန်တဲ့ ဆေးတွေကို ဝေမျှသောက်တာ
ဒီပြဿနာကလည်း အတော်များများ မသိလိုက်ဘဲ လုပ်မနေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဥပမာ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်က နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်။ ဆေးခန်းသွားပြတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးပေးလိုက်တယ်။ သက်သာသွားတယ်။ ဆေးတွေကို ကုန်အောင် မသောက်ဘူး။ သိမ်းထားလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ခေါက် မိသားစုဝင်ထဲက အခြား တစ်ယောက်က လက္ခဏာခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ရောဂါ ဖြစ်တဲ့အခါ ကျန်နေတဲ့ဆေးတွေကို သောက်လိုက်ပါလား ငါ့တုန်းကလည်း အဲ့လိုပဲ သက်သာသွာတာလေဆိုပြီး တိုက်တယ်လေ။ တကယ်က မသောက်သင့်ပါဘူး။ ရောဂါပိုးက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူနိုင်သလို ကိုယ်ခံအားရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကလည်း ကွာပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ဆေးကျန်တွေကို မျှသောက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဖျားတယ်။ ကိုယ်တွေပူလို့ မနေနိုင်တဲ့အဆုံး ဆေးခန်း သွားပြလိုက်တယ်။ ဆရာဝန်က ဆေး​တွေပေးလိုက်တယ်။ ဆေးက ၂ ခွက်လောက် သောက်တော့ သက်သာသွားတယ်ဆိုပါတော့။ နေကောင်းသွးပြီလေဆိုပြီး ဆေးဆက်မသောက်တော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပိုးတွေက ဆေးကို ယဉ်ပါးသွားတတ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးတွေကို မကူးစက်ဖို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာက ဆေးယဉ်ပါးမှုပြဿနာကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းနည်းတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ကို မကြာခဏဆေးတာက စလို့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို သေချာ ဂရုစိုက်ပြီး
ဆေးယဉ်နေတဲ့ ပိုးတွေရှိရာအရပ်ဒေသတွေဆီကို သွားရောက်တာ
ဆေးယဉ်းပါးမှု ဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို မသိဘဲ သွားမယ်။ ပိုးကူးစက်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ဆေးယဉ်ပါးပြီးသား ပိုးကို ကူးစက်ခံလိုက်ရတာကြောင့် ကုသဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်က ဒီအချက်တွေကို ဆင်ခြင်ရင်း ဆေးယဉ်ပါးမှုကို ကာကွယ်လိုက်ပါ။
What causes AMR? https://www.amr.gov.au/about-amr/what-causes-amr Accessed Date 16 November 2020
Center for Disease Control (2015) Antibiotics Aren’t Always the Answer http://www.cdc.gov/features/getsmart/ Accessed Date 16 November 2020
World Health Organization (2015) Antibiotic Resitance http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/ Accessed Date 16 November 2020
World Health Organization (2015) Global Action Plan on Antmicrobial Resistance. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf Accessed Date 16 November 2020
European Antibiotic Awareness Day (2015) http://ecdc.europa.eu/en/EAAD/Pages/Home.aspx Accessed Date 16 November 2020